Etu esi agba ọsọ .sh faịlụ na ịpị abụọ na ọnụ
Inicio >> software >> Linux >> Etu esi agba oso .sh
Chọpụta otu esi eji ya na ọnụ ya wee pịa ya
na faịlụ na ndọtị .sh bụ faịlụ nwere ederede, iwu na bash asụsụ, nke na-agba na Linux. SH bụ shei Linux nke na - agwa kọmputa ihe a ga - eme.
N'ụzọ anyị nwere ike isi kwuo na ọ ga-adị ka Windows .exe.
E nwere ụzọ dị iche iche esi agba ya. Aga m akọwa 2. Otu na ọnụ ya na onye ọzọ ya na eserese eserese, ya bụ, na oke, na mgbe ịpịrị aka abụọ pịa ya e gburu. Can pụrụ ịhụ ya na vidiyo na n'okpuru bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ maka ndị na-ahọrọ omenala nkuzi.
Gbaa .sh na eserese eserese na ngosipụta clicks
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ihe niile na pịa nke òké, ị nwekwara ike ime ya. Iji mee ka ọ rụọ ọrụ dị ka Windows, Pịa faịlụ abụọ ma ọ malite. Enwere usoro 2 dị ọsọ ọsọ ịhazi.
Ihe mbụ ị ga - ahọrọ ịgwa ya na faịlụ ahụ ga - eme
Gaa ebe faịlụ ahụ dị wee pịa ya na bọtịnụ ziri ezi. A ga-egosipụta menu ma anyị na-enye Njirimara
Select họrọ ego nke Kwe ka faịlụ na-agba ọsọ. n'ụzọ dị otú a anyị na-enye ikike igbu
Anyị nwere ike irite uru iji gbanwee taabụ ahụ Mepee ya na, nke bụ mmemme anyị họọrọ dị ka nke Aprilos, ọ bụrụ na anyị agaghị egbu ha, anyị ga-emepe ha wee hụ ihe ha nwere. M na-eji Gedit ma ọ bụ Visual Studio Code
Mgbe ahụ, anyị ga-ahazi njikwa faili ahụ
N'ikpeazụ n'ime njikwa faili ahụ gaa na menu ma họrọ ihe choro na taabụ Omume ma ebe ahụ ị nwere ike ịgwa ya ihe ịchọrọ iji faịlị ahụ.
Enwere ọtụtụ nhọrọ. Mepee faịlụ ahụ, gbaa ya ma ọ bụ jụọ anyị. M họọrọ ịjụ anyị. A ga-egosi anyị ya.
Gbaa .sh na ọnụ
Anyị na-emeghe ọnụ, na Ctrl + Alt T, igodo mmalite ma dee ọnụ ma ọ bụ jiri akara ngosi m na-enwe mgbe niile na Ubuntu launcher, bia, n'akụkụ aka ekpe.
Tozọ esi agba ya bụ ịga na ndekọ aha ebe faịlụ ahụ dị. cheedị na anyị nwere faịlụ ok.sh na / scripts / folder
Anyị na-abanye edemede (ị ga-aga n'okporo ụzọ ebe ị nwere)
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ anyị na-agba ya, anyị ga-enye faịlụ ikikere
Ma anyị na-agba ya ọsọ
Na voila ebe a bụ usoro
N'okwu nke anyị, "Ok" na-apụta n'ihi na anyị abatala n'ihe edemede ahụ na-eme.
Ihe kachasị mkpa na ihe ndị mmadụ na-emehie kachasị dị na ụzọ, n'ụzọ, na ịghara ịnweta folda ebe faịlụ a ga-egbu bụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, hapụ okwu.
Extra ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ
Obere ihe ma oburu n’acho imuta. Enwere iwu ndị ọzọ iji mee ihe .sh ị nwere ike ịme
./file.sh the. na-egosi na faịlụ ahụ dị na ndekọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgba ya na ụzọ ụzọ faịlụ / to / file.sh
Iwu ọzọ ị ga-agba na mgbakwunye ./sh faịlụ bụ
sh faịlụ sh
Categories Linux Igodo bọtịnụ
1 Gbaa .sh na eserese eserese na ngosipụta clicks
1.1 Ihe mbụ ị ga - ahọrọ ịgwa ya na faịlụ ahụ ga - eme
1.2 Mgbe ahụ, anyị ga-ahazi njikwa faili ahụ
2 Gbaa .sh na ọnụ
3 Extra ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ